Farmaajo oo loo diiday inuu iclaamiyo shirka wada-tashiga | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo loo diiday inuu iclaamiyo shirka wada-tashiga
Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo ayaa laga hor joogsaday inuu iclaamiyo shirka wadatashiga ee dhawaan la filayo inuu ka dhaco Magaalada Muqdisho.
MUQDISHO, Soomaaliya – Beesha Caalamka ayaa wadda dadaaladii ugu danbeeyay ee la doonayo in la isgu keeno Madaxda Dowladda Fadaraalka iyo Madaxda Maamul Goboleedyada, si looga wada qeyb galo, shir loo madlan-yaahay inuu ka dhaco Muqdisho dhamaadka todobaadkan.
Wakiilka Xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay James Christopher Swan iyo Danjiraha Mareykanka Donald Yukio Yamamoto, oo karkarinaya qorshaha loogu diyaar garoobayo shirkaan ayaa Farmaajo ka hor joogsaday inuu iclaamiyo shirka, iyaga oo ka baqaya in qeyb ka mid ah Madaxda Maamulladu ka soo hor-jeestaan baaqa Farmaajo.
Waxaan dhag qalaq loo siin, Saddexdii baaq ee ugu danbeeyay ee Madaxweynaha mudadii sharcigaa ahayd ka dhaamaatay isugu yeeray Madaxda Maamul Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland ayaana si cad u diiday in soo xaadiraan shirarkaas, iyagoo taas ku sababeeyay in Farmaajo uusan heysan sharciyad uu wadahadallo qaran ku iclaamiyo.
Beesha Caalamka, qudhoodu kuma dhawaaqi doonaan shirkaan, hayeeshee, waxa gacanta ku hayaan guud ahaan maamulka shirka, waxa ayna damaanad qaadayaan dhaqan galka wixii lagu heshiiyo.
Waxaa la filayaa in Shirkan uu ka dhici doona Teendhada Afisyooni oo ah halkii ay ka dhacday doorashadii 8 Febaraayo ee lagu doortay Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Farmaajo.
Ugu danbeyn, shirkaan waxaa lagu saxiixi doonaa qodabadii ka soo baxay shirkii 17 September 2020 iyo baaqii guddigii farsamada ee ku shiray xarunka KMG ee Maamulka Koofur Galbeed Baydhabo.